ugu yaraan hal dagaalyahan oo lagu dilay kadib markii maleeshiyo looga shaki qabo Al-Shabaab ay weerareen saldhig ay ciidanka Puntland ku leeyihiin gobolka Mudug - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandugu yaraan hal dagaalyahan oo lagu dilay kadib markii maleeshiyo looga shaki qabo Al-Shabaab ay weerareen saldhig ay ciidanka Puntland ku leeyihiin gobolka Mudug
Saldhiga ciidamada Puntland ee gobolka Mudug. [Xigashada Sawirka: Villa Puntland]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Maleeshiyaad looga shaki qabo Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada Puntland ku leeyihiin deegaanka Jeexdin ee gobolka Mudug maanta oo Arbaco ah, sida ay ku warantay idaacada maxaliga ah ee Radio Daljir.
Ugu yaraan hal nin oo katirsan maleeshiyada ayaa lagu soo waramayaa in dilay sidoo kale dhowr kamid ah ciidamada Puntland ayaa ku dhaawacmay waxa ay ciidanka Puntland ugu yeereen “isku day weerar maleeshiyo oo fashilmay”, sida ay ku warantay Radio Daljir.
New York-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Britain Theresa May ayaa balanqaaday in dalkeeda uu kordhinayo taageerada Soomaaliya ee la dagaalanka maleeshiyada Al-Shabaab. Hadalkeedii ugu horeeyay ee ay ka jeediso shirka Qaramada Midoobay ee New York ayay ku [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Taliyeyaal cusub ayaa loo magacaabay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Magacaabida ayaa waxaa soo jeediyay wasaaraddaha difaaca, amniga, iyo cadaalada waxaana ansixiyay golaha wasiiradda oo [...]